Ny Top 8 Things to Do in Kigali, Rwanda
Destinations Afrika & Afovoany Atsinanana
Ny Top 8 Things to See in Kigali, Rwanda
Niorina ho renivohitra taorian'ny nahazoan'i Rwanda ny fahaleovan-tena avy any Belzika tamin'ny taona 1962, dia miorina eo amin'ny foibe ara-jeografika ny Kigali. Loharanon-karena voajanahary ho an'ny mpitsidika ary fototra tena tsara ho an'ny fitsidihana tsara indrindra an'i Rwanda. Raha manam-potoana ianao, dia miera mandany andro vitsivitsy farafahakeliny ao an-tanàna fa tsy mandalo fotsiny. Tamin'ny taonjato faha-XIX no nopotehan'ny Rwanda Genocide i Kigali, dia natsangana ho iray amin'ireo kapitalista madio sy azo antoka indrindra any Afrika . Ny atsy ho atsy sy ny orinasa fanombohana dia manome fifandrifian-javatra mahavariana eo amin'ny tandavan-tendrombohitra manakaiky manodidina ny havoana ary ny tranombakoka zavakanto ankehitriny, trano fandraisam-bahiny ary trano fisakafoanana dia manampy ny tontolo iainana ara-tontolo iainana any Kigali.
Kigali Genocide Memorial. Michael Cook - Altai World Photography / Getty Images
Tamin'ny volana Aprily 1994, dia nanangana famonoana olona nanohitra ny vahoaka Tutsi ireo mpikambana ao amin'ny governemantan'ny Hutu maro ao Rwanda taorian'ny ady nifanaovan'ireo foko roa. Tamin'ny tapaky ny volana Jolay tamin'io taona io ihany dia nisy olona iray tapitrisa efa novonoina, ka 259 000 amin'izy ireo no nalevina tao amin'ny fasana masin'ny Fahatsiarovana Genocide Kigali . Ny Fahatsiarovana koa dia ahitana telo fampisehoana maharitra, ny ankamaroan'izy ireo dia natokana ho fahatsiarovana ireo fisehoan-javatra sy ireo niharam-boina tamin'ny famonoana jeneraly. Rehefa avy nisaintsaina momba ireo zava-mahatsiravina nanova ny tantaran'i Rwanda vao haingana ianao, dia makà fotoana hisaintsainana ny zavatra nianaranao tao amin'ny zaridaina mahasalama. Ny Fahatsiarovana dia misokatra fito andro isan-kerinandro amin'ny 8:00 maraina hatramin'ny 5:00 hariva
Ny sisa, Nyamata Church. Doug McKinlay / Getty Images
Ho fanabeazana bebe kokoa momba ny zava-nitranga tao amin'ny Genocide Rwanda, dia mandeha 30 kilometatra atsimon'ny tanàna mankany amin'ny memorial ao amin'ny Church of Nyamata. Eto dia manodidina ny 10.000 Tutsi no nitady fialokalofana tao amin'ny fitambaram-piangonana kanefa dia novonoina izy ireo rehefa nampiasa grenady ny Hutu mba hivoahana ny varavaran'ny varavarana mihidy. Androany, ny sisa tavela amin'ireo niharam-boina mihoatra ny 50.000 dia nalevina tao Nyamata. Ny fiangonana dia mbola mitazona ny lavaka bala teo amin'ny vala sy ny rindrina, ary ny akanjo ratsin'ny tra-boina (sy ny zavatra manokana azy ary ny taolany sasany) dia aseho ao anatin'ny fiangonana koa ho fampahatsiahivana mahatsikaiky ny antony nahatonga ireo zava-nitranga tamin'ny taona 1994 tsy azo avela hitranga intsony.
Ny Foibe Women's Women's Center
Nyamirambo Neighborhood, Kigali. Tom Cockrem / Getty Images
Ao amin'ny distrikan'ny Nyamirambo any Kigali no misy ny fikambanana Nyamirambo dia fandraisana an-tsitrapo natao hanomezana ny vehivavy Rwanda amin'ny fanabeazana sy fanofanana ilaina hitadiavana asa. Ireo vehivavy miasa eto dia mampiasa ny fahaiza-manaony mba hamoronana akanjo marevaka, akanjo sy fitaovana famokarana an-trano avy amin'ny lamba kitenge nentim-paharazana - ireo rehetra dia manome fahatsiarovana mahatalanjona amin'ny fanamafisana ny fandaharan'asan'ny vondrom-piarahamonina. Ataovy azo antoka ny hanao sonia ny iray amin'ireo fandehanana mandeha am-bisikileta malaza. Aorian'ny fisakafoanana nentim-paharazana sy lesona iray any Kinyarwanda, manaraka ny torolàlana iray eo an-toerana ianao amin'ny fitsidihana ny trano Nyamirambo, orinasa tsy miankina sy moske. Aorian'izay dia mankafy sakafo matsiro any amin'ny tokantrano iray ao an-tokantrano.
Mipetraka eo anelanelan'ny fivarotana bokin'ny Ikirezi, ny Inzora Rooftop Café dia manome ohatra tsara dia tsara ho an'ny kolontsain'ny kafe any Kigali. Ny fomba fijery mahatalanjona ny tanàna sy ny havoana manodidina dia manamboatra lakana eny ambony tafo, raha toa kosa ny kafe ao an-trano dia mihalehibe, voafantina ary novolavolan'ireo mpiara-miasa amin'ny vehivavy manerana an'i Rwanda. Ny menio dia manao ny rariny amin'ny hipsterana tandrefana tandrefana-mieritreritra ny macadamia sy ny chia voa maina ary arahan'ny gluten-free maitso. Ambonin'izany, ny zavatra rehetra avy amin'ny fitaovana ho an'ny fitaovana dia azo ampiasaina eo an-toerana. Ny kafe dia misokatra amin'ny 8: 30 hatramin'ny 8 ora hariva amin'ny alin'ny faran'ny herinandro ary hatramin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 6 ora hariva amin'ny faran'ny herinandro, ka mahatonga azy io ho toerana tena tsara ho an'ny brunch mafana na takariva iray miaraka amin'ny fomba fijery.
Noforonina tamin'ny taona 2012 ireo rahalahy roa manana fitiavana amin'ny fanohanana sy fampisehoana ireo mpanakanto Rwanda nipoitra, amin'izao fotoana izao ny Inema Art Center dia iray amin'ireo trano fialam-boly ankehitriny ao an-tanàna. Izy io dia manasongadina ny asan'ireo mpanakanto folo monina an-tserasera amin'ny sehatra maro samihafa. Manana fandaharam-pianarana sy fandaharam-pampianarana ho an'ireo taranaka Rwanda manaraka izy ireo, isan'izany ny atrikasa isan-kerinandro ho an'ny kamboty miaraka amin'ny fahaizan'ny zavakanto, fandaharana dihy nentim-paharazana ho an'ny ankizy ary fandaharanasa ho an'ny vehivavy. Ireo mpitsidika dia afaka manararaotra (ary mividy) ny zavakanto ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, na ny fivarotana ny firavaka, ny lambam-pandriana ary ny hoditra novokarin'ny mpianatra ao amin'ny foibe fanomezana. Miaraha mijery mozika tsy tapaka sy dihy koa.
Kimironko Market, Kigali. Tom Martin / Getty Images
Ho an'ny fanandramana ara-barotra tena izy, mitodika mankany amin'ny trano fonenana malalaka fantatra amin'ny anarana hoe Kimironko Market. Ity no tsena malaza sy be mpankafy indrindra any an-tanàna miaraka amin'ireo mpivarotra amidy any Rwanda manontolo ary koa Atsinanana, Afovoany ary Afrika Andrefana. Ho hitanao ny fahatsiarovana sy ny asa tanana ho an'ny vidin'ny rock-bottom sy ny kibon'ny kitenge izay afaka miova ho akanjo tsy manam-paharoa eo amin'ny sehatr'asa eo an-tsena eny an-tsena. Kimironko koa dia toeram-pivarotana ho an'ny Rwandans ao an-toerana miaraka amin'ireo fizarana samihafa mivarotra voankazo sy legioma maivamaivana, akanjo, fitaovam-baoritra ary hena sy sira. Mafana fo, mihoamampana ary matetika mahatsiravina, saingy ny kaleidoscope amin'ny fahitana, feo ary fofona dia fomba fijery marina momba ny fiainana andavanandro ao Kigali.
Fantatra eny anelanelan'ny vondrona sy ny mponina ao an-toerana toy ny toerana hialana aorian'ny andro feno fotoana, ny Repub Lounge dia manohana hatrany an'i Kigali. Ny afrikana afrikanina dia mampiasa lamba vita amin'ny kitenge sy fitaovana vita tànana mba hamoronana atmosfera mifangaro, raha toa ka mibontsina ny fijery ivelany amin'ny lampihazan'ny tanàna ny tafo ety ivelany. Ny sakafo dia manasongadina ny sakafo Rwanda sy Afrikana Afrikana mifantoka amin'ny sakafom-boankazo (na dia misy aza ny safidy ho an'ny vegaria). Ny brochettes (aka skewers) dia sehatra iray manokana ary tsara ho an'ny fizarana sakafo dia tonga lafatra ho an'ny vondrona lehibe kokoa. Mametraha divay misy rongony na cocktail avy amin'ny lisitry ny zava-pisotro misy alikaola, miangavà ary miala sasatra raha mihaino mozika mivantana Afro. Ny mpiasa dia malaza tsara ary ny vidiny dia azo ekena.
Raha vao ny hotely lehibe indrindra tao an-drenivohitra, dia notohanan'ny Hôtel des Mille Collines ny Hotel Rwanda ny taona 2004. Ny sarimihetsika dia nanaraka ny tantaran'ny mpitantana Hutu Paul Rusesabagina, izay nandao ireo mpitsoa-ponenana Tutsi an-jatony nandritra ny famonoana rwandey. Na dia andraikitr'i Rusesabagina aza ny adihevitra, ny hotely dia sehatra mahavariana ny tantaran'i Rwanda. Ny voninahitry ny talohan'ny 1994 dia efa voadaka nandritra ny fotoana, saingy mbola toerana mahafinaritra ho an'ny drinks amin'ny tolakandro any am-baravaran'ilay toeram-pisakafoanana, na ny fanatobiana sakafo ara-tsakafo sy iraisam-pirenena amin'ny trano fisakafoanana 4 ety. Raha nisotro ny cocktail teo an-jaridaina tao an-jaridaina ianao, dia diniho fa ny dobo dia loharano tokana ho an'ny mpitsoa-ponenana ao anaty hotely.
Inona ny Oman ho an'ny mpivarotra vehivavy solo?
7 amin'ireo toerana tsara indrindra any Taïwan any Afrika
Torohevitra lehibe ho an'ny fifandraisana an-trano raha mbola mandeha any Afrika
Tanjon'ny Adventure: Tanànan'i Rose-Red ao Petra any Jordania
Meroë Pyramids, Sodana: Ny Torolalana ho an'ny Mangatsiaka Manadino
The Little Five: Safari Animals kely kokoa any Afrika
Andro iray tao amin'ny Trano Frantsay
Ao anatin'ny Atlanta: Chip Grabow an'ny Radio Roaster
Torohevitra momba an'i Afrika: Ahoana ny fampiasana toeram-pivoahana an-tongotra
Ny Packers Best Bars any Milwaukee
10 Zavatra Manokana ao Hartford
Mila Fanaovana Fivoriambe elektronika hiditra any Kanada ve ianao?
Fampisehoana fanta-daza voalohany ho an'i Azia miaraka amin'ny Korean Air
Oktoberfest any Pittsburgh
5 amin'ireo fampindramam-bola madinika indrindra eto amin'izao tontolo izao
Ny antony antony tokony hitsidihanao an'i India
2018 Ny Torolalana ho an'ny Fetiben'ny Durga Puja